कस्तो चुनाव, कसको चुनाव ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कस्तो चुनाव, कसको चुनाव !
पुस १९ गते, २०७४ - ०७:१६
चुनाव सकेर काठमाडौं फर्केका उम्मेदवारहरू अहिले खर्चका दुईथरी विवरण बनाइरहेका छन् । एउटा, सक्कली खर्चको लामो सूची र अर्को निर्वाचन आयोगलाई दिने किफायती विवरण । हारेका र जितेका दुवैका लफडा उस्तै छन् । गाडी, साउन्ड सिस्टम, होटल र प्रचार सामग्रीका बाँकी बिलका लागि जिल्लाबाट फोन आएकाआयै छन् । आमा समूह, युवा क्लब, मन्दिर र अरू सामुदायिक संस्थासँगका ‘कमिटमेन्ट’ त कति छन् कति ! अाजकाे नयाँ पत्रिकामा छापिएकाे यो लेख तिनै उम्मेदवारमध्ये करिब एक दर्जन साथीहरूका अनुभवमा आधारित छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठूलै सफलता भन्नुपर्छ, सुकुमवासी र विपन्न बस्तीलाई चाहि“ अब सबैले ‘किन्नैपर्ने’ ठाउँ मान्ने भएछन् । लालपुर्जाका आश्वासन यति पुराना भएछन् कि अब भाषणमा पनि यो भनिन छाडेछ । गाली सुकुमवासी र विपन्नले खाए पनि मत बेच्न भने मध्यमवर्गले तिनलाई उछिनिसकेछ । काकाकै छोरा होस्, चुनाव भनेपछि पैसा नपाई मोटरसाइकल स्टार्टसम्म गर्दाे रहेनछ ।
पुस १९ गते, २०७४ - ०७:१६ मा प्रकाशित